တင်ဒါအသိပေးချက် - နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကားငှားရမ်းခြင်းအားယာဉ်မောင်းနှင့်ငှားရမ်းခြင်း RayHaber
« ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက် - Yenikapı-Atatürkလေဆိပ်မြေအောက်လိုင်းအဆင့်စခန်းများစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - TCDD Vangölüကူးတို့ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၊ ပင်လယ်အတားအဆီးနှင့်စည်ဝယ်ယူရေး »
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6တူရကီအထွေထွေဒါရိုက်တာသမ္မတနိုင်ငံ။ ဒေသန္တရ SERVICE ကိုရုံးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory CONTROL
Teknik Personel Çalıştırılması ve Sürücülü Araç Kiralanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KN: 2019 / 568260
က) အမည်: STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရ SERVICE ကိုရုံးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory CONTROL
ခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi Kurtulus ရပ်ကွက်အတွင်း 01120 SEYHAN Seyhan / ADANA
ဂ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807
ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းဝဘ်စာမျက်နှာကို အသုံးပြု. ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်နှင့် e-လက်မှတ်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/
နုဝယ်ယူမှု၏ 2-service ကိုဘာသာရပ်
a) Adı : Teknik Personel Çalıştırılması ve Sürücülü Araç Kiralanması İşi
2 İNŞAAT MÜHENDİSİ, 1 MAKİNE MÜHENDİSİ, 1 HARİTA MÜHENDİSİ VEYA HARİTA TEKNİKERİ, 1 MİMAR, 1 HARİTA TEKNİSYENİ, 1 SÜRÜCÜLÜ ARAÇ
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adana
ဃ) ကာလ / Delivery Date: နေ့စွဲ 01.01.2020, 31.12.2020 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံးသည့်ရက်စွဲ
ဃ) စတင်အလုပ်နေ့စွဲ: 01.01.2020
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 03.12.2019 - 10: 00
ခ) တင်ဒါကော်မရှင်အစည်းအဝေးများ၏အရပ်ဌာန (ကမ်းလှမ်းမှုကို၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်): TCDD6။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးခန်းကြမ်းပြင်: 1 Seyhan / ADANA
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Tool ကို Drive ကိုအာဏာပိုင်နှင့်အတူမောင်းနှင် ...
တင်ဒါသတိပြုပါ: ငှားရန်ဆိပ်ကမ်း Inflight ဝန်ဆောင်မှု Tools များ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Drive ကိုမော်တော်ကားဝန်ဆောင်မှုAlınacaktırငှါး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Drive ကိုမော်တော်ယာဉ်ငှားရမ်းပါလိမ့်မည်
တင်ဒါအသိပေးချက် - Tecer-Kangal နည်းပညာဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ…
တင်ဒါအသိပေးချက် - Esenboğaလေဆိပ်နည်းပညာပိတ်ဆို့မှုနှင့်…
နည်းပညာဆိုင်ရာ Staffing ဆွဲဆောင်မှုများ 640 မှ KGM
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဆိပ်ကမ်းအတွက်လုံခြုံရေးကင်းလှည့်ဝန်ဆောင်မှု ...
အဆိုပါငှားရမ်းမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများ၏ယာဉ်မောင်း, TCDD6။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
TCDD Adana6။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
Ugur Mumcu ရင်ပြင်ရပ်ကွက်အတွင်းလွတ်မြောက်ရေး 01130 Seyhan / Adana
Seyhan / Adana, Adana 01130 Türkiye + Google Maps ကို